राष्ट्रपतिमा विद्या भण्डारी दोहोरिने निश्चित, के गर्दैछन् झलनाथ ? – Setosurya
कठमाडौं । वर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारी थप पाँंच बर्षका लागि दोहोरिने भएकीछन् । स्रोतका अनुसार उनलाई दाहोर्याउने बिषयमा सत्तासीन दल एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सहमति भएको छ। त्यसैगरी उपराष्ट्रपतिमा पनि वर्तमान उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन नै दोहोरिने भएका छन्।
एमालेमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले राष्ट्रपतिका लागि ईच्छा गरेपनि त्यो पुरा नहुने भएको छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिका कार्यकाल पाँच बर्षको हुने व्याबस्था छ। तर संक्रमणकालीन ब्यबस्था अनुसार बनेका राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले दुई बर्ष मात्र बिताउन पाएका छन्। उनीहरुलाई अर्को एक कार्यकाल थपेर काम गर्न दिनुपर्ने तर्क आए पछि उनीहरु दोहोरिन लागेको स्रोतले बतायो।
एमालेमा बरिष्ठ नेता खनालले राष्ट्रपति हुने आसा राखेको भएपनि पार्टी भित्रको माहोल भण्डारीको पक्षमा छ। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समेत भण्डारीलाई नै राष्ट्रपति बनाउने पक्षमा रहेको निकट स्रोतले बतायो।
पूर्व राष्ट्रपतिलाई पनि झण्डै राष्ट्रपति सरह सेवा सुविधा दिनुपर्ने प्रावधान् छ। तर भण्डारीलाई एक कार्यकाल दाहोर्यादा पूर्वको सूचीबाट एकजना घटने छन् ।
राष्ट्रपतिका लागि फागुन २९ गते निर्वाचन हने कार्यकक्रम रहेको छ।
बढी बोलेको भन्दै गगन थापाविरुद्ध एक्सनमा उत्रिए देउवा, यस्तो हुँदैछ कारवाही
फर्केर हेर्दा : यी हुन् वर्ष ०७३ का चर्चित घटनाक्रम
काठमाडौंमा को अगाडि ? नसोचेकै परिणाम आउँदै !
बालुवाटार बोलाएका कमल थापासँग देउवा बोल्दै नबोलेपछि……….